ပစ်တိုင်းထောင်တေးဥယျာဉ်: မာန်ဟိန်းကျော်၊ သူ့ထက်စွမ်း၊ ဟိန်းထက်ဇော် တုနှိုင်းမဲ့အ​မေ
***ပစ်တိုင်းထောင်တေးဥယျာဉ်မှ ကြိုဆိုပါတယ်၊ ရောက်လာသူအားလုံး ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေ ***ပစ်တိုင်းထောင်တေးဥယျာဉ်သည် မူပိုင်ခွင့်များကို ချိုးဖေါက်ထားခြင်းမဟုတ်ပါ မြန်မာသံစဉ်တေးသီချင်းများအား ထာဝစဉ်ရှင်သန်စေရန် ရည်ရွယ်ပါသည် *** ကျွန်တော်ရဲ့မွေးရပ်မြေ ပခုက္ကူမြို့သို့လည်း လာလည်ပါလို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ် *** မာန်ဟိန်းကျော်၊ သူ့ထက်စွမ်း၊ ဟိန်းထက်ဇော် တုနှိုင်းမဲ့အ​မေ
| by pyittainndaun.myanmarsongs
ပစ်တိုင်းထောင်မှာ တင်ထားသော သီချင်းများ၊ ဇာတ်လမ်းများကို ဒေါင်းယူရန်နည်း မသိသောသူများအတွက်ရည်ရွယ်ပါသည်၊ တင်ထားသော ဒေါင်း link ကိုကြည့်၍ ဒေါင်းယူနည်းကို ကြည့်ရှု့နိုင်ပါသည်။
Share နာမည်Download နည်းကြည့်ရန်
၁။ Pcloud Download နည်းကြည့်ရန်
၂။ Copy Download နည်းကြည့်ရန်
၃။ Dropbox Download နည်းကြည့်ရန်
၄။ Kiwi6 Download နည်းကြည့်ရန်
၅။ Zippy Share Download နည်းကြည့်ရန်
၆။ MediaFire Download နည်းကြည့်ရန်
***"ကျနော် ကိုယ်တိုင်သီဆိုထားတဲ့ မြန်မာသံစဉ်တေးသီချင်းလေးတွေပါ၊ အားပေးပါအုံး၊ အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်"***
ကျနော်ကိုယ်တိုင် သီဆိုထားတဲ့ တွံတေးစိုးအောင်ရဲ့ တေးသီချင်းများဖြစ်ပါတယ် ဝါသနာတူရင် မန်ဘာလဲဝင်ပေးပါအုံး
ပခုက္ကူမြို့ရှိ တန်ခိုးကြီးဘုရားများ xxx xxx The most famous pagodas in Pakokku
အသစ်တင်တိုင်း Email ပို့ပါမည်။
DVB MRTVလွှတ်တော်MRTV-4 MWDSky Net Up to Date MITV MNTV BUDDHAN R CChannel 75 Plus Movie & Video Website
ဖရီးမြန်မာဗွီစီဒီburmeseclassic.com ရွှေအိုးမြန်မာရုပ်ရှင် ရွှေအိမ်မက် မြန်မာဇာတ်လမ်းများမင်းသီလMyanmar Movie Channel ရွှေဗွီဒီယို
Myanmar CNN သစ်ထူးလွင်ဧရာဝတီဗွီအိုအေ မြန်မာ Myanmar Expressဘီဘီစီ မြန်မာ လွတ်လပ်တဲ့အာရှအသံရိုးရာလေး မဇ္ဈိမသတင်းစာဒီမိုကရတ်တစ် မြန်မာ့အသံ (DVB) မိုးမခယနေ့မြန်မာNHK World မြန်မာတိုင်း(မ်)The Voice Eleven News7 Day News Journal ပေါ်ပြူလာဂျာနယ် The Messenger News Journal ခေတ်လူငယ် Economy Website
စီးပွား/ကူးသန်း စီးပွားရေးသတင်းဂျာနယ်ဈေးကွက်ဂျာနယ် ရွှေဆဌဂံMyanmar Business Today
ဆေးပညာစာများမြန်မာတို့အတွက် မြန်မာ့ဆေးမြီးတိုမြင်းမိုရ်ဦး Public Health in MyanmarSwe Sone Media Group
clock. Powered by Blogger.
အနိုင် ရွှေလမ်းငွေလမ်း ခင်းပေးပါ့မယ်
pCloud Mediafire Download Download တွံတေးသိန်းတန် သီချင်းများ
ခင် ညွန့် ရည် "ဇာတိမာန်"
စန္ဒရားချစ်ဆွေ၊ မာမာအေး ရေခဲစိမ်ဘီယာ
နားဆင်ခံစား ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဇာတ်လမ်းများ (၃၆)
ရေဒီယိုတေးများ အမှတ် (၅၈)
မာန်ဟိန်းကျော်၊ သူ့ထက်စွမ်း၊ ဟိန်းထက်ဇော် တုနှိုင်​...
ရာဇာဝင်းတင့် ငြင်းပယ်မှာ စိုးမိတယ်
နားဆင်ခံစား ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဇာတ်လမ်းများ (၃၅)
ပိုင်သက်ကျော် တာနောယက္ခ နဲ့ လက္ခဏာ
အောင်သူ ပန်းဆက်သမားနဲ့ မိစိမ်းကား
ရေဒီယိုတေးများ အမှတ် (၅၇)
အဖွဲ့ မြရိပ်ဝန်းကိုလွမ်းပါတယ် (၁၉၉၅)
အောင်ခြင်းရှစ်ပါး အပါအ၀င် ဗုဒ္ဓဓမ္မတေး တီးလုံးဆန်းမျ...
ရီရီသန့်ရွှေပြည်အေးအလွမ်းပြေ
နားဆင်ခံစား ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဇာတ်လမ်းများ (၃၄)
ရေဒီယိုတေးများ အမှတ် (၅၆)
ကြည်ကြည်ဌေး ပန်းပန်လျက်ပါ မဗေဒါ
ရေဒီယိုတေးများ အမှတ် (၅၅)
ရေဒီယိုတေးများ အမှတ် (၅၄)
ရေဒီယိုတေးများ အမှတ် (၅၃)
အဖွဲ့ မင်္ဂလာတေး နှင့် မင်္ဂလာပွဲ
ထက်လှိုင်သူ ရင်ထဲက ပန်း
ရေဒီယိုတေးများ အမှတ် (၅၂)
သ၀န်တိုတာ ချစ်လို့ ပါ
မြန်မာပြည်သိန်းတန်၊ မင်းအောင်၊ အနိုင် စင်တော်ကောက...
ရေဒီယိုတေးများ အမှတ် (၅၁)
နောက်ပိုင်းဇာတ်ထုပ် လှည်းသားငါးရာပြဇာတ် ရွှဲကုန်သည် လယ်ထွန်မင်္ဂလာ ညီတော်မင်းနန်ချွတ်ခန်း အသျှင်နှစ်ပါးနန်းတက်
သီပေါမင်းပါတော်မူခန်း မဟာဗုဒ္ဓ၀င် ( ဖွားတော်မူခန်း ) မရူပစန္ဒာ (၃ပြားတွဲ ရာဟုလာအမွေတောင်းခန်း စောမွန်လှ မဟော်သဓာ ဒါန်းစီး မောင်နှမ ပုပ္ဗယက သုပ္ပဗုဒ္ဓ ၏ နောက်ဆုံးနေ့ အရှင်မဟာမောဂ္ဂလာန်၏အတိတ်ဘ၀
တာနောယက သူခိုးကြီးထီးလတ် ပဋိက္ခရား
ပဉ္စပါပီ ရှင်မွေ့နွမ်း ၊ မင်းနန္ဒာ
ဥစ္ဆင်္ဂ သာလိကုမာရဇာတ်တော် ဂီတရူးပြဇာတ် ဒွေးမယ်နော် သန္တတိ
ကျိုက်ထီးရိုးဘုရားသမိုင်း ချင်းဖဝေး သစ္စကထေရ်ရီမယ် မဟော်သဓာ
ရွှေကရင်မောင်နှမ ရွှေချိုးဖြူ မူလခဲ လောင်းဆဒ္ဒန်
လောဘမှောင် သောတ္ထိသေန၊ သမ္ဗူလ
သံယောဇ မဏိကက္ခဇာတ် နကုလ မဟာဝင်
သုပ္ပဗုဒ္ဓမြေမျိုခန်း ပဉ္စပါပီ သဒ္ဒာသုမန
ဇာတ်လမ်း ဗိုလ်အောင်ဒင်ပြန်လာပြီ(၁)-(၂) ဗိုလ်အောင်ဒင်ပြန်လာပြီ(၃) ဗိုလ်အောင်ဒင်ပြန်လာပြီ(၄) ဗိုလ်အောင်ဒင်ပြန်လာပြီ(၅) ဗိုလ်အောင်ဒင်ပြန်လာပြီ(၆) သားဗိုလ်အောင်ဒင် စိုးမိုးမေတ္တာ ရေကောင်းရေသန့် တဇောက်ကန်းဘဂျမ်း ဗျူဟာဘုံ မြညိုငိုတဲ့နေ့ မြညိုငိုပြန်ပြီ မြညိုချစ်သောကိုရင်သြ ငယ်ငယ်တုန်းကချစ်ရေစင် ဇာတ်ခုံပေါ်ကတဲ့အခါ အိုးနင်းခွက်နင်း အချစ်နဲ့အမျှ ငြိမ်းချမ်းကြစေသတည်း အညာမိသွားတဲ့ အညာသားလေး မာနီအောင် (သို့မဟုတ်) မိုးနက်မ သြော်ခယ်မ မှိုင်းဝေချစ်သောခက်သစ္စာ
သမုဒယရင်ခွင် အရိပ်ပမာ ဆားပုလင်းနှင်းမောင်နှင့် မင်းကွတ်သီးသုံးလုံး မတည့် အတူနေ မဟာမိတ်ချစ်သူ တ၀ဂူ သူနဲ့ ကျွန်တော်လင်မယားတော်သည် ထမင်းတစ်လုတ်ထင်းခုတ်စာမယ် ပျဉ်းမငုတ်တို ဗေဒါလမ်း မရွှေအထက်တန်းစား ယောက္ခမကြီးရေးတဲ့ဖူးစာ
ရွှေသည်း ငွေသည်း စိန်နဲ့ခွဲ
ကြင်ဖော် & ကြင်ဖော်ငယ်ဝေး
အသဲနုတဲ့တောကကိုရင် ဆားပုလင်းနှင်းမောင်နှင့် သံတော်ဆင့်
ချစ်တောင်ပြုံးကုမုဒြာအလွမ်း ရွှေလင်ဗန်းနဲ့အချင်းဆေးမင်းမွေးတဲ့သမီး သစ္စာဖြင့်ရအပ်သောမေတ္တာ
မောင်ကြီးသစ္စာရှင် မိုးမလင်းသေးဘူး မိနန္ဒာ
ကောလိပ်ဂျင် ကိုကိုထိန်လင်းထိုက် နဲ့ ညီမယမင်းပိုက်
ငါ့ငွေ ...ငါ့အချစ် ပြဇာတ်
ဆားပုလင်းနှင်းမောင် နှင့် မမင်းဖြူမှန်မှန်ပြော
လူဝင်စားမယ်နု အတာနဲ့အမာ အရူးငမောက်
လူမိုက်ကကျနော် အဖော်ကပါပ လူမိုက်ကကျနော် အဖော်က ပန်းချီလေးဝင်း လူမိုက်ကကျနော် အဖော်က အဇာတသတ် လူမိုက်ကကျနော် အဖော်ကဒုက္ခ အေးသာဈေးမလာရ &အေးသာဈေးပြန်လာပြီ
လူပျိူကြီးဦးဘချစ် ရဲ့ ချစ်ဒုက္ခ
စိန်လင်ဗန်းနဲ့ ထမင်းစား မင်းမွေးတဲ့သား
ဂျမ်း ဆားပုလင်းနှင်းမေ နှင့် ပရိပုစ္ဆာဗျာကရဏ
ငါမသေဘူး ရေကူးတက်တယ် စည်းဝိုင်းအပြင်မှာ မင်းနဲ့ ငါ
ပိတောက်ရယ် ငုရယ် ခေါင်းရမ်းရယ်
မောင်ဖေငယ်လို အချစ်မျိုး ဇော်ဇော့်မမ မန်းမမ
ပန်နုရောင်သွေး ရွှေတောင်ကြားမှာ မပျော်ပါ ၊ ဖိုးဇော်လမ်းပေါ်မှာ
မ သုံးလုံးနယ်မြေက ကိုရွှေမြ
ပုဂံမြို့ သူ မင်းကတော်
လူပျိုကြီး ဦးဘချစ် ရဲ့ ချစ်ဒုက္ခ
သမ္မုတိ နှလုံးသား ကြွေး
နောက်ဆုံးတော့ ကျော်ဟိန်းဟာ ကျော်ဟိန်းပါပဲ
မောင်ဘဂျမ်း နှင့် ဘဒ္ဒနုဝတီ
မုဆိုးလဲသားကောင် သားကောင်လဲမုဆိုး ဟာသကျူရှင် ကိုသိန်းတန်ချစ်တဲ့ ထွေးညို ကျားဘခက်
မြင်းခွါတစ်ချက်ပေါက် မီးတစ်ချက်တောက် မခုတ်တက်တဲ့ကြောင်
ဆန္ဒနဲ့ဘ၀ ဇမ္ဗူဒီပ အလွမ်း
တစ်လိမ်နှစ်လိမ် ပွေလိမ်ရှုပ်တယ် ပုဂံသား မောင်ဘမော် ပုဏ္ဏား ဘကွန်း
မောင်မောင်ချစ်တဲ့ မိမိမာ မေတ္တာစိမ့်စမ်း ယောက္ခမပိုင်ပစ္စည်း အကုန်ယူတဲ့နည်း
ကျွန်မရဲ့ ကိုတာတေ ကျွန်တော့်ရဲ့ ဖေဖေ
တို့ တွေအားလုံးပါဝင်မည် ထိပ်ဆုံးက
ချစ်ဧည့်သည် သိုင်းနယ်မှ ကျားသောင်းကျန် ကိုးပွင့်ဖူးစာ
ပန်းကလေးများပွင့်တော့မည် နားဆင် (၂၅)
မေတ္တာသာပဓါန လူနှစ်ယောက်၊ ကားတစ်စီးနဲ့၊ မိုးတစ်ည
ပစ်တိုင်းထောင်တေးဥယျာဉ်ရှိတေးသီချင်းများနှင့် ဇာတ်လမ်း များသည်ကိုယ်တိုင်ရှာဖွေထား ခြင်းနှင့် အခြားအခြားသော ဝက် ဆိုဒ်များ၊ ဘလော့များ နှင့် Facebook များမှ ကူးယူဖေါ်ပြ ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်ပစ်တိုင်းထောင်တေးဥယျာဉ် Admin အနေဖြင့်၎င်း ဝက်ဆိုဒ်များ၊ ဘလော့များ နှင့် Facebook များအားလွန်စွာမျှ ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ပစ်တိုင်းထောင်တေးဥယျာဉ်သည်ရှေးခေတ်ဟောင်းမြန်မာသံစဉ်များ၊ခေတ်ပေါ်မြန်မာသံစဉ်များ နှင့် အသံဇာတ်လမ်းများအား ဝါသနာအလျောက်စုစည်းထားသောဘလော့တစ်ခုဖြစ်သောကြောင့် လာရောက်အားပေး ကြသောဝါသနာတူ မိတ်ဆွေ၊ သူငယ်ချင်းများအားအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
ဘလော့ခရီးသည် Softwareမြို့တော်Windows,Internet,Browsers,Social Networks,Softwares IT Reshare Site KP-3 နည်းပညာKnowledge is Freeမိုးထက်မြင့် (နည်းပညာ) အင်တာနက်ဂျာနယ်မောင် (စွယ်စုံကျမ်း)တကူးသားလေးရဲ့ နည်းပညာစုစည်းမှု ညီနေမင်း (နည်းပညာ)Myanmar IT Ebooks Study English Website
English Grammar Online4UThe Best English4YouRose of York Non Stop English Learn EnglishEnglish For SuccessDaily LifeWorld - English Effortless EnglishTalk English.comEnglish Speak.com
ဓမ္မရံသီစာမျက်နှာDhamma Downloadဆရာတော် ဥုးသုမင်္ဂလာ Dhamma Video Dhamma Web
တည်ဆောက်သည့်အချိန် 2010 ပစ်တိုင်းထောင်တေးဥယျာဉ်. Design by Nyo Aung